Pochettino Oo Aaminsan In Saxan Liin Ah Ay Ka Caawineyso Kooxdiisa Tottenham Inay Champions League Ka Qaadaan Liverpool - Wargane News
Home Sports Pochettino Oo Aaminsan In Saxan Liin Ah Ay Ka Caawineyso Kooxdiisa Tottenham...
Tababarah kooxda Tottenham Mauricio Pochettino ayaa ku mashquulsan isku diyaarinta kulankii ugu weynaa noloshiisa isagoo isku dayaya inuu saxan liin ah u isticmaalo inuu kooxda kaga saaro niyad-xumida.
Pochettino ayaa doonaya inuu hubiyo inuusan qaraareyn marka ay xiddigihiisa wajahayaan Liverpool Sabtida soo socota finalka Champions League.
Sidaasi darteed waxa uu saxan liimo ay ka buuxdo uu mar walba dhigtaa xafiiskiisa isagoo aaminsan inay ka caawineyso inay koobka ugu qiimaha badan Yurub ka qaadaan kooxda Jurgen Klopp ee Liverpool.
Pochettino ayaa u sheegay talkSPORT: “Saxanka liimada waxa ay xafiiska u yaalaan inay iga xijaabaan isha xun.
“Xafiiiskeyga dad badan ayaa soo gala kana baxa, dadka imaanaya oo dhana kuma yimaadaan xafiiskeyga niyad wanaag.
“Dadka qaar iyagoo niyad-xun ayay yimaadaan, waxaana ishooda ay aadaa liinta. Waa sida gaashaan. Waxay ka dhuuqdaa dhamaan xumaanta, waadna arki kartaa…. waa wax aan la rumeysan karin sababtoo ah waxaan liimada bedeladaa malaha 10 maalmood kasta.
“Laakiin marar qaar waxaan bedelaa seddex ama afar maalmood kasta sababtoo ah liimada waxa ay noqotay mid xun oo foolxumo ah.”
Pochettino oo quraafaadka aaminsan ayaa sheegay inuusan ogeyn qofka liimada xafiiskiisa xumeeya ee xumaanta ay ka buuxdo, waxaana uu si kaftan ah farta ugu fiiqay gudoomiyaha Tottenham Daniel Levy.
Tababaraha reer Argentina ayaa yiri: “Ma arki karo dadka niyada-xun laakiin marka Daniel uusan joogin liinta waxa ay xafiiiskeyga taalaa muddo bil ah.”
Somaliland: Faysal Cali Waraabe Oo Kabaha La-Dulmaray Madaxweyne Farmaajo